University of Southern Queensland - Baro in Australia Abroad
gaabinta : USQ
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Southern Queensland
Qor at University of Southern Queensland
The University of Southern Queensland (USQ) waa dhexdhexaad ah, Jaamacadda gobolka ku salaysan in Toowoomba, Queensland, Australia, saddex xarumood jaamacadda ee Toowoomba, Springfield iyo Ipswich. Waxay bixisaa koorsooyinka sharciga, caafimaadka, injineernimada, cilmiga ah, ganacsi, waxbarashada, iyo fanka. USQ ayaa hoggaamiye ee waxbarashada masaafada soo abaabulo technology tan iyo 1970, kaas oo loo oggolaa inay u adeegaan miyiga Queensland iyo bulshada caalamka iyada oo ay ku campus, off campus, iyo barnaamijyada online. In 1998 waxaa loo magacaabay Adduunka ee Best On iyo Off Campus University by Council Caalamiga ah ee Open iyo Distance Education oo ahaa goolka guusha ee University Australian of Award sanadka ee 2000-2001.
Waxaa ka shaqeeya saddex machadyada cilmi-baarista iyo toddoba xarumaha cilmi-baarista oo ay diiradda saaraan badan oo kala duwan ee ganacsiga, beeraha, sayniska, deegaanka, iyo arrimaha farsamada.
hay'ad waxay ku sii dhisnaatay 1967 sida campus Darling Downs of Institute Queensland ee Technology. In 1971, waxa ay noqotay Darling Downs Institute of Education Advanced, markaas College University of Southern Queensland ee 1990 iyo ugu dambeyntii ku University of Southern Queensland ee 1992.
USQ kibir taageertaa, qiyamka, oo ixtiraamaya kala duwan ee balaadhan oo ah aqoonsiga dhaqanka, luqadood, iyo waxay aaminsan yihiin gudahood jaamacadda. Waxaan ka shaqaynaa si ay u siiyaan macluumaad si dhamaan xubnaha USQ, sidoo bulshooyinka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
at USQ, waxaan ku faraxsanahay of our kala duwanaanta:
shaqaalaha hadda naga dhashay 66 different countries
waxaan leenahay 33 xubnaha shaqaalaha Indigenous
17% dadka ardayga waa ardayda caalamiga ah
ardayda caalamiga ah ka iman 94 different countries
101 luqadood oo kala duwan ayaa looga hadlaa by our firfircoon (Australian iyo kuwa caalamiga ah) ardayda.
dayada USQ si ay u siiyaan jawi waxbarasho badbaado halkaas oo ardayda dhan iyo macalimiintu si cad u wadaagi karaan fikrado iyo xushmad ka hadlo fekerkiisa – iyadoo aan loo eegin aqoonsiga dhaqanka ama diinta. Iyada oo la aqoonsado iyo ixtiraamida kala duwanaanshaha our, innagu waynu karaynaa inaynu si loo xoojiyo dadaalka aan ugu jirno cilmi iskaashi, iyo amaan USQ ee barida iyo barashada waayo-aragnimo.
at USQ, waxaan ku dadaalnaa in aan:
xoojin hoggaanka USQ in dhaqamada nidaamka Australian waxbarashada sare iyo dibada
ka qayb aqoonsiga gaarka ah ee USQ by horumarinta barnaamijyada cusub ee dhaqamada
ku lug University iyo kuwa maxalliga ah ee bulshada ee dhaqamada kala dhex bixinta gaarka ah, barnaamijyada bulshada u janjeedha
horumariyo iskaashiga u dhexeeya dawladaha iyo ururada aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, gobolka iyo heer qaran ee degaanka of dhaqamada
taageero dhismaha dhaqanka xoogan oo dhaqamada by qorista ardayga, abuurnimo ee barashada iyo baridda iyo caalami
ka qayb dhinaca caalami ee Jaamacadda, iyo
kor loogu qaado fikradda ah dhaqamada iyo faa'iidadiisa ku dhaqanka.
Ganacsiga & Commerce
Caafimaadka & Community
Humanities & Isgaarsiinta
In ka yar konton sannadood baan noqon waxbarashada caan ah waxbaridda multi-campus iyo hay'ad cilmi-bixinta dunida oo dhan. -Xidhkii galay dhar ah USQ waa aragtida iyo go'aan ka mid ah xubno badan University iyo bulshada, sanadihii la soo dhaafay, ayaa qalabka fulinta ballaarinta iyo koritaanka, qaabeynta waxa maanta aynu aragno.
On 2 December 1960 kulan caam ah ka badan 200 dadka ka Toowoomba iyo wareegsan keentay in aasaasay of Dhismaha Association Darling Downs Jaamacadda guddoominayay ee Dr Alex McGregor. Waxayna u dhawaadeen inay qotomiyey hay'ad waxbarasho sare oo ku saabsan Downs Darling ah. Ururka, oo taageero ka bulshada deegaanka, ololeeyay dowladda, kiciyey lacag iyo ugu danbeyn ku guulaysteen in la formation of Institute Queensland ee Technology (Darling Downs) on 2 February 1967.
Laga soo bilaabo mid ka mid ah dhismaha beer ku dhashay cagaaran, maamulaha, sideed wakhti buuxa iyo shan iyo tacliinta waqti-dhiman, iyo shan shaqaale taageero baray marka hore 140 ardayda 29 koorsooyin injineernimada, barashada ganacsiga iyo sayniska heer Diploma iyo Certificate. From kuwan bilowga is-hoosaysiiya hay'ad wanaagsan ayaa koray.
1971 Darling Downs Institute of Education Advanced (DDIAE)
In June 1971, Machadka noqotay college multi-Ujeedada goboleedka gacanta ee ay Golaha College u gaar ah.
hab DDIAE ayaa waxaa xuddun u ah oo ku saabsan barashada iyo baridda ardayda diiradda loo marayo manhaj shaqo-diiradda. koorsooyinka Professional ayaa lagu bixiyaa:
farshaxanka iyo deeqsi.
DDIAE The maray koritaanka weyn ee ardayda u dhexeeya 1970 iyo 1990 oo sidaas awgeed, campus Toowoomba ka weyn koray.
bixinta waxbarashada Distance noqday hab waxbarasho doorbidayso our ardayga inta lagu jiro bartamihii 1970-. by 1980, diiwaan dibadda dhaafto diiwaan on-campus, oo na siiyo fursad ay ku soo galaan suuqa caalamiga ah. Inta lagu guda jiro 1986-7 waxaan aqbalay in aan ka yarayn saddex-meeloodow off-xeebta-qorid ardayga caalamiga ah ee Australia.
In 1980 DDIAE u dhaqaaqay dhinaca gaaro heerka jaamacadeed buuxa, markii hore sida College University muddo ku meel gaar hoos xayaysiin ah oo ka tirsan Jaamacadda Queensland.
Inta lagu jiro wakhtigan Professor hore waxaa loo doortay, barnaamijyada cilmi waaweyn ayaa waxaa la aasaasay, barnaamijyada cusub ee waxbaridda ayaa la soo bandhigay, iyo waxa uu noqon doono $ 100m barnaamijka shuqullada caasimada sano ee soo socota la bilaabay.
hay'adda helay xaaladda jaamacadda buuxa ee 1992, noqday jaamacadda Syddansk Queensland (USQ). University ayaa bedeshay ka dib siyaabo badan oo tan iyo markaas, lugu daro:
horumarinta profile a cilmi muhiim ah
ballaarinta our barnaamijyada shaqo koorso postgraduate
sameynta dhismaha laanta weyn: Campus Fraser Coast ee Hervey Bay on xeebta dhexe ee Queensland iyo Campus Springfield ee waddada galbeedka Brisbane ee
ballaarinta xiriirka aannu la bulshooyinka maxalliga ah, sida shuraako la dhiso College Queensland ee Khamri Dalxiiska ee Stanthorpe la Department of Education and Training iyo Southern Queensland Institute of TAFE
sii ballaarin barnaamijyada caalamiga ah ee ay ka mid yihiin xiriirka horumarinta xarumaha waaweyn off-xeebta iyo joogitaan xooggan on-xeebta iyada oo loo marayo Xarunta Waxbarashada Sydney ah.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Southern Queensland ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Southern Queensland rasmiga ah Facebook
University of Southern Queensland dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Southern Queensland.